MyanPay E-commerce System
MyanPay makes it easy and quick to pay from the internet.
MyanPay makes payment in several ways to the receivers.
In this payment, you can cash securely because the receiver or merchant don’t need to know your personal information, finance information, bank account information, credit/debit Card information.
MyanPay will save securely your secret information except payment information and shopping information that are necessary to know for the receivers.
Moreover, MyanPay prevents the unnecessary loss, lies for Online Shopping and Online Purchase with Buyer Protection Policy.
By using MyanPay, you can purchase safely with several payment in Online Shopping and Online Purchase.
By using MyanPay, you can perform the cashing and transferring securely and quickly to your friends and families.
MyanPay supports weekly, monthly, and yearly payments of your phone bill and meter bill easily.
MyanPay also provides fundraising when necessary for someone or other organization.
Pay Online MyanPay အသုံးပြု၍ အင်တာနက်မှတဆင့် လုံခြုံစိတ်ချ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
MyanPay မှ ငွေလက်ခံမည့်သူထံသို့ နည်းလမ်းအမျိုမျိုးဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
ထိုသို့ ငွေပေးချေရာတွင် လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Personal အချက်အလက်များ၊ Finance ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ Bank Account အချက်အလက်များ၊ Credit/Debit Card အချက်များကို တဖက်မှ ငွေလက်ခံမည့်သူ (သို့မဟုတ်) ကုန်သည် (Merchant) ထံသို့ ပေးသိစရာ မလိုအပ်ဘဲ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
MyanPay မှ ငွေလက်ခံမည့်သူထံသို့ မဖြစ်မနေ သိရှိရန် လိုအပ်မည့် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ နှင့် ဈေးဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက် အနည်းငယ်မှလွဲ၍ အခြားသော လူကြီးမင်း၏ လျို့ဝှက်သင့်သည့် အချက်အလက်များကို လျို့ဝှက်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် Online Shopping, Online Purchase ကိစ္စရပ်များအတွက် Buyer Protection Policy များဖြင့် မလိုလားအပ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ၊ လိမ်ညာမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် Online Shopping, Online Purchase ကိစ္စရပ်များကို ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဈေးဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုများထံသို့ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် Online မှတဆင့် ငွေပေးပို့ခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းများကို လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ Phone Bill, Meter Bill စသည့် အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် ပေးချေရမည့် ငွေပေးချေမှု ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ရိုးရှင်း လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့မှ အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) အသင်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းများထံသို့ ငွေကြေးလှုဒါန်းခြင်းများကိုလည်း လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
Copyright © 2012–2021 MyanPay. All rights reserved.
MyanPay® isaregistered trademark of MyanPay Co., Ltd. that is officially registered company [ License - 1914/2011-2012 ] under the Ministry of Planning and Finance, the government of the republic of the union of Myanmar.